मधेशमा भयको राजनीति
विचारलाई दमन गरेर होइन, वार्ता गर र साझा समाधान निकाल्न सक्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
‘मधेश’को राजनीति प्रयोग, दमन, बहिष्करण, भय र स्वार्थमा पिल्सिँदै अघि बढेको छ । मधेशका नागरिकलाई ग्राहकको रूपमा राज्यसत्ताले प्रयोग गर्ने र नेतृत्व तप्काले मतदाताको रूपमा मात्र प्रयोग गर्दैआएको छ । नेपालका हरेक परिवर्तनका आन्दोलनहरु, राजनीतिक पार्टीहरु र विगकास पूर्वाधारको मुख्य उगंमस्थल मधेश नै हो । तर, मधेशको अवस्था हरेर बुझ्न सकिन्छ कि कुनै प्रतिशोध साँध्नकै लागि हरेक कुरामा पछाडि पारिएको छ । मधेश नेपालदको मेरुदण्ड हो ।
मधेशको वन जंगल, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कलकारखाना र जनजीवनलाई धरासायी पारेर साझा नेपालको भाषण दिने अगुवाहरू नै स्वतन्त्रताको भयबाट आक्रान्त भएका छन् । समानता पनि नदिने र स्वतन्त्रता पनि नदिने ? रंगभेदको अन्त्य पनि नगर्ने र अखण्डता पनि खोजी बस्ने राजनीतिले मधेशलाई अफगानी बाटोमा हिँडाउन बाध्य बनाएको छ । मधेशमा भएका कलकारखानाहरूसमेत राज्यले विभिन्न बहानामा बन्द गर्दै आएको छ । मधेशको कृषि, कलकारखाना र रोजगारीलाई बन्द गरेर मधेशका युवाहरूलाई विदेसिन बाध्य तुल्याउने र मधेशमा दमनको बाटोबाट नागरिकलाई उपभोग्य विषयवस्तुको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने सोचका कारण मधेशका नागरिकहरू भयमुक्त जीवन बाँच्न बाध्य छन् । दिनहुँ विदेसिन बाध्य भएका मधेशी युवा जनक्तिका सामु देशले कुनै विकल्प दिन चाहेको छैन । दुई राष्ट्रिय राज्यको पूर्वाधार तयारी गर्दै राष्ट्रवादको नाममा भीडन्तको तयारी गर्ने विभेदी मानसिकताका कारण अहिले मधेशमा भयको राजनीति संस्थागत हुँदैछ ।
युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । युवा देशको कर्णधार हो भन्छन् तर, ती कर्णधार नेपालको लागि हैन खाँडी मुलुकका लागि हो जस्तो लागि रहेको छ । मधेशसँग विभेद भयो भनेर मधेशका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलहरू खोलिए, मधेशमा आएर ठूला–ठूला क्रान्तिकारी भाषण गरियो तर, व्यवहारमा मधेशलाई प्रयोग मात्र गरियो । मधेशको हक अधिकारका लागि खोलिएका पार्टीहरू पटकपटक सहमति र सम्झौता गर्दै सत्तामा गए तर आफूले जनतासँग गरेका वाचाहरू बिर्से । जसले गर्दा मधेशी दलहरूप्रति युवाहरूमा अहिले अविश्वासको खाडल नै बनेको छ । रंगभेद र अखण्डता सँगसँगै अघि बढ्दैन भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकहरू किन बुझ्न चाहिरहेका छैनन् ? जनता मारेर समस्याको समाधान हुँदैन । समुदायको आधारमा सोच बनाउने र समुदायकै आधारमा सम्मानका दण्ड दिने काम अनुचित हो । नेपालमा हतियारको राजनीतिको श्रीगणेश गरेको नेपाली कांग्रेस अनुयायीको रूपमा एमाले र माओवादीहरूले शासन सत्ता चलाउने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको चाहना राखेका मधेशीहरू दमित हुनुपर्ने अवस्था धेरै दिन कायम रहन सक्दैन । भयको राजनीतिले प्रतिशोधलाई जन्म दिन्छ र प्रतिशोधले रक्त राजनीतिलाई ।
नेपाललार्ई साझा र समृद्ध बनाउन साझा शासन सहितको स्वशासनको नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । मधेशका नागरिकलाई पहिचान र सिंगो मुलुकलाई विकासको बाटोमा डोहो¥याउन सके समसयाहरु समाधान हुँदै जाने थियो । विचारलाई दमन गरेर होइन, वार्ता गर र साझा समाधान निकाल्न सक्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रकाशित मिति : २०७३ साल माघ २१ गते शुक्रबार ।